Fraomazy soja, tsara ho an’ny ankizy
Ovy amin’ny nofon-trondro sy fraomazy
Akora ilaina · Ovy 800g novoasana sy notetehina efamira · Ronono 60ml · Sira sy dipoavatra · Menaka oliva 5 ml · Tongolo notetehina efamira · Karaoty 3 notetehina efamira · Selery tahony 3 notetehina efamira · Lafarinina 1 sf · Ronono 125ml · Ranona legioma 80ml · Nofon-trondro (saumon) 125g · Fraomazy cheddar efa nokikisana 1 tasy
Akora ilaina · Sira 1 tsongo · Toaka 1 sf · Lavanila 1 sf · Dibera 50g · Siramamy 250g · Ronono ½ l · Atody 2 · Tamenak’atody 2 · Lafarinina 100g
Vomanga amin’ny ron’akoho Akora ilaina
Vomanga lehibe 2 (voasana sy tetehina boribory tsy matevina loatra) Karaoty lehibe 2 (voasana ary tetehina boribory toy ireo vomanga) Menaka oliva 2 sf Ranom-boasarimakirana 30ml Tamotamo 1 sk Sira ½ sk
Akora ilaina (ho an’olona 6) · Kotileta na soron’ondry 800g · Tratran-kisoa 300g · Saosisy 400g · Gana amin’ny boaty 2 · Tsaramaso maina 1 kg · Tongolo be 3 · Tongolo gasy 3 · Voatabia 250g · Voatabia lehibe 2 · Chapelure 6 sf · Bouquet garni 1 · Persily tahony 2 · Sira sy dipoavatra
Akorailaina · Lafarinina 125g · Atody 3 na 4 · Sira 1 tsongo · Dibera 80g · Ronono 125g · Rano 125g
Akoho nasiana saosy sôkôla Akora ilaina
Vovoka kanelina ½ sk · Vovoka jirofo ½ sk · Vovoka kotomila ½ sk · Sira 1 tsongo · Dibera na menaka 4 sf · Nofon’akoho 600g · Siramamymisy lavanila 1 sk · Sôkôla 30g · Sésame 2 sf · Tongologasy hasiny 2 · Rano 500ml · Ron’akoho 500ml · Tongolo be notetehina manify · Amande 5 sf · Voatabia 3 efa novoasana sy notetehina manify · Raisin sec 125ml · Sakaymaina 10 Fikarakarana azy
Mofo amin’ny amende Akora ilaina
“Semoule” na lafarinina mangahazo 500g · Siramamy 125g · Dibera nalefahina 50g · Hanitra 120ml (voasarimakirana) · Sira 1 tsongo · Amande nopotehina manify 150g · Siramamy 3sf · Hanitra 2 sf · Vovoka kanelina ½ sk Ho an’ny sirop : · Siramamy 500g · Rano 500ml · Hanitra 1 sf · Voasarimakirana · Tantely 150g
Manan-karena proteina avy amin’ny zava-maniry ny fraomazy vita amin’ny soja, ka azo ampifandimbiasina amin’ny trondro sy ny hena.
Tombony ilay izy tsy misy sira no sady tsy mamy, ka azo hikarakarana izay sakafo tiana mihitsy sady mitroka ny tsiron’izay fangaro ampiarahina aminy. Tsara hanin’ny ankizy izy satria be kalsioma, “fer”, maneziôma sy pôtasiôma. Fa ho an’ireo efa mitsaha-pitsaihana dia mampitony ilay hafanana miakatra tampoka any anaty vatana, na ny “bouffée de chaleur”, izy.
“Mousse” amin’ny fraomazy soja
· Sôkôla mainty 200g
· Fraomazy soja 400g
· Ranom-boasary, na ranom-boasarimakirana, na ronono soja 3 sf
Fomba fikarakarana azy
1. Tapatapahina ny sôkôla. Atambatra aminy ao ny ranom-boasary sy ny siramamy (raha toa ka asiana). Atsonika amin’ny evo-drano ireo
2. Avela ho matimaty rehefa mitsonika. Arotsaka ao anatiny ao ny fraomazy soja dia kapohina miaraka ireo. Raha manana “mixeur” dia izay no ampiasaina
3. Zaraina ho ao anaty vera miisa efatra ary ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 12 ora na mihoatra.
Fraomazy soja atao kraokety
· Fraomazy soja na “Tofu” 210g
· Karaoty efa nokikisana ¼ tasy
· Leviora 2 sf
· Tongolo efa notetehina manify 1
· Tongolo gasy 1
· Rano 3 sf
· “Chapelure” 1 fonosana
· Sésame 2 sf
1. Potserina ao anaty “mixeur” ireo akora rehetra fa anajanonana kely kosa ny kotomila ary tsy alefa miaraka aminy ao ny voasarimakirana.
2. Rehefa vita dia volavolaina araka izay hitiavana azy ny endriny
3. Endasina amin’ny menaka tsy dia mahamay loatra.
4. Aroso miaraka amin’ny maiônezy dia andrarahana kely amin’ny ranon’ilay voasarimakirana.
5. Azo ampiarahina amin’ny salady na hanina amin’ny vary ihany koa.